Guddoomiye Mursal Oo Faray Xildhibaannada Golaha Shacabka In Ay Dalka Ku Soo Laabtaan Ugu Dambeyn 5-Ta Bisha Simbteembar – Kalfadhi
Guddoomiye Mursal Oo Faray Xildhibaannada Golaha Shacabka In Ay Dalka Ku Soo Laabtaan Ugu Dambeyn 5-Ta Bisha Simbteembar
Warqad kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa looga codsaday xildhibaannada ku maqan dalka dibaddiisa in ay ay ugu dambeyn 5-ta bisha Sibteembar ku soo laabtaan dalka, si loo guda galo kalfadhiga Afaraad oo qorshuhu yahay in uu furmo 10-ka bisha Sibteembar 2018-ka.
Warqadda ayaa lagu yiri “ sida aad la socoto furitaanka kalfadhiga afaraad ee Golaha Shacabka waxaa la qorsheynayaa 10-ka bisha Sibteembar, sidaas daraadeed waxaa dhammaan mudanayaasha golaha shacabka laga codsanayaa in ay dalka soo galaan ugu dambeyn 5-ta Sibteembar “
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa fasax galay 28-kii bishii Meey. Fasaxaas oo ahaa mid aan sharci aheyn.
Fasaxa sharciga ah ee xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa billabanayay 10-ka bishii Luulyo waxa uuna ku egyahay 10-ka bisha Sibteembar ee soo socoota.
Kalfadhiga hadda fasaxiisa lagu jiro waxaa uu noqonayaa kii ugu wax tarka iyo shaqada yaraa baarlamaanka federaalka wixii ka dambeeyay xilliga ku-meel-gaarka. Golaha Shacabka ayaa kulmay 11 jeer oo keli ah. Dhamaadka bishii soon, xukuumada ayaa labada gole ee sharci dejinta u qeybisay “lacag aan la macneyn” oo ka dheeraad ah gunnooyinka iyo msuhaarka sharciga ah. Lacagta oo wadar ahaan gaareysa $1,645,000 [hal miyal lix boqol iyo afartan iyo shan kun oo doolar] ayaa xildhibaan walba laga siisay $5000 [Shan kun oo doolar].